Wararka - Halka Qaliinka lagu isticmaalo
Halka Qaliinka lagu isticmaalo
Xagee Loo Isticmaalaa Qaliinka: Meelkasta!
08 Nof 2017 Waxaa qoray Greg Johnson
Qaliinnada waxaa laga heli karaa meel kasta oo maanta ah: guryaheena, waddada hoosteeda, dhismayaasha ganacsiga iyo kumanaan meelood oo ku dhex yaal korantada iyo dhirta biyaha, warshadleyda, waraaqaha, warshadaha kiimikada iyo xarumaha kale ee warshadaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Warshadaha waalka ayaa dhab ahaan balaaran, oo leh qaybo ka duwan biyo qaybinta ilaa awooda nukliyeerka ilaa saliida iyo gaaska kor iyo hoos. Mid kasta oo ka mid ah warshadaha adeegsadahan dhammaadka ah waxay isticmaalaan qaar ka mid ah noocyada aasaasiga ah ee filtarka; si kastaba ha noqotee, faahfaahinta dhismaha iyo qalabka inta badan aad ayey u kala duwan yihiin. Waa tan muunad qaadista:
Adduunyada biyo-qaybinta, cadaadisku marwalba wuu yara hooseeyaa heerkulkuna waa heer sare. Labadaas arrimood ee xaqiiqadu waxay oggol yihiin tiro ka mid ah walxaha naqshadeynta waalka ee aan laga heli doonin qalab aad u dhib badan sida heerkulka heerkulka sarreeya. Heerkulka adeegga biyaha wuxuu u oggolaanayaa isticmaalka elastomers-ka iyo shaabadda caagga ah ee aan ku habboonayn meel kale. Qalabkan jilicsan ayaa u oggolaanaya furayaasha biyaha in lagu qalabeeyo si ay si adag u xirxiraan dhibcaha.
Tixgelin kale oo ku jirta qalabka adeegga biyaha ayaa ah xulashada qalabka dhismaha. Birta iyo kabka birta ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa nidaamyada biyaha, gaar ahaan khadadka ballaadhan ee bannaanka ka baxsan. Khadadka aadka u yaryar si fiican ayaa loogu maamuli karaa qalabka waalka naxaasta ah.
Cadaadisyada ay inta badan faallooyinka shaqaaluhu arkaan badanaa way ka hooseeyaan 200 psi. Taas macnaheedu waxa weeye naqshadaha leh darbijiifka dhaadheer ee ka sii dhumuc weyn looma baahna. Intaa markii la dhahay, waxaa jira xaalado halka fiyuusyada biyaha loo dhisay inay la tacaalaan cadaadiska sare, illaa 300 psi. Codsiyadaan badanaa waxay ku xiran yihiin biyo mareeno dhaadheer meel u dhow isha cadaadiska. Mararka qaar fallaaraha biyaha ee cadaadiska sareeya sidoo kale waxaa laga helaa meelaha ugu cadaadiska sareeya biyo xireenka dheer.
Ururka Biyaha ee Mareykanka (AWWA) wuxuu soo saaray qeexitaanno daboolaya noocyo farabadan oo kala duwan iyo filtarro loo adeegsaday codsiyada shaqooyinka biyaha.
Dhinaca rogmada ee biyaha la cabi karo ee cusub ee galaya xarun ama qaab dhismeedku waa biyaha wasakhda ah ama soosaarka bullaacadaha. Khadadkaani waxay soo ururinayaan dhammaan dareeraha qashinka iyo adkaha waxayna u jiheeynayaan warshad lagu daweeyo bulaacada. Dhirtan daaweyntani waxay ka kooban tahay tuubooyin badan oo cadaadis hooseeya iyo fureyaal ay ku fuliyaan "shaqadooda wasakhda ah". Shuruudaha qasabadaha biyaha wasakhda ah xaalado badan way ka dabacsan yihiin shuruudaha adeegga biyaha nadiifka ah. Iridda birta iyo walxaha jeegagga ayaa ah xulashooyinka ugu caansan adeegga noocan ah. Baalalka caadiga ah ee adeeggan waxaa loo dhisay si waafaqsan shuruudaha AWWA.
Inta badan korontada laga dhaliyo Mareykanka waxaa laga soo saaraa dhirta uumiga iyadoo la adeegsanayo shidaal-fosil iyo mashiinno xawaare sare ku socda. Dib-u-foorarsiga daboolka warshad koronto oo casri ah waxay dhali doontaa aragti ku saabsan cadaadis sarreeya, nidaamyada dhuumaha heerkulka sarreeya. Khadadkaani waa kuwa ugu muhiimsan geedi socodka dhalinta tamarta uumiga.
Albaabbada albaabku wali waa xulashada ugu weyn ee warshadaha korontada ku shaqeeya ama ka baxsan, in kasta oo ujeedo gaar ah leh, Y-pattern globe valves ayaa sidoo kale la helaa. Waxqabadka sare, fallaaraha adeegga muhiimka ah ayaa caan ku ah qaar ka mid ah nashqadeeyayaasha warshadda korontada waxayna soo galayaan adduunkan hal mar oo toos ah oo dunidu ku badan tahay.
Metallurgy waxay muhiim u tahay qalabyada codsiyada awoodda, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya heerarka hawlgalka ee supercritical ama ultra-supercritical ee cadaadiska iyo heerkulka. F91, F92, C12A, oo ay weheliyaan dhowr nooc oo ah "Inconel" iyo "alloys-steel-alloys" ayaa sida caadiga ah loo isticmaalaa dhirta korantada maanta. Fasallada cadaadiska waxaa ka mid ah 1500, 2500 iyo xaaladaha qaarkood 4500. Dabeecadda wax ka beddelka dhirta korantada ugu sarreysa (kuwa u shaqeeya sida loogu baahan yahay oo keliya) sidoo kale waxay culeys weyn ku haysaa fallaagada iyo dhuumaha, oo u baahan naqshado adag oo wax looga qabanayo isku-dhafka daran ee baaskiil wadista, cadaadis.
Marka lagu daro mashiinka uumiga ugu weyn, dhirta korantada waxaa lagu rakibaa tuubooyin isku dhafan, oo ay ku badan yihiin irrido badan, adduunyo, jeeg, balanbaal iyo kubbadaha.
Warshadaha tamarta nukliyeerka waxay ku shaqeeyaan isla mabda'a uumiga / xawaaraha sare. Farqiga aasaasiga ah ayaa ah in warshad tamarta nukliyeerka ah, uumiga waxaa abuuray kuleylka habka kala-baxa. Farsamooyinka tamarta nukliyeerka waxay la mid yihiin ilmaadeeradooda shidaalka shidaalka ah, marka laga reebo isirkooda iyo shuruudaha lagu daray ee kalsoonida buuxda. Farsamooyinka nukliyeerka ayaa loo soo saaray heerar aad u sarreeya, oo leh dukumiinti u qalmid iyo kormeer buuxinaya boqolaal bog.
SOO SAARKA SALIIDDA IYO GAASKA
Ceelasha saliida iyo gaaska iyo goobaha wax soo saarka ayaa ah kuwa isticmaala culus ee filtarka, oo ay kujiraan filtooyin badan oo culus. In kasta oo qulqulka saliidda boqolaal cagood hawada ku sii daadanaya ayan mar dambe dhici doonin, haddana sawirku wuxuu muujinayaa cadaadiska iman kara ee saliidda iyo gaaska dhulka hoostiisa ku jira. Tani waa sababta madaxyada ceelasha ama geedaha kirismaska ​​loo dhigo dusha sare ee xarigga tuubada dheer. Kulamadan, oo ay ku jiraan iskuluubyadooda iyo qalabyo gaar ah, ayaa loogu talagalay in lagu xakameeyo cadaadiska kor u dhaafaya 10,000 psi. In kasta oo marar dhif ah laga helay ceelasha berriga laga qoday dhulka, haddana culeysyada sarsare ee aadka u sarreeya waxaa badanaa laga helaa ceelasha badda ee qoto dheer.
Naqshadeynta qalabka Wellhead waxaa lagu daboolay qeexitaannada API sida 6A, Qeexitaanka Qalabka Wellhead iyo Qalabka Geedka Kirismaska. Farsamooyinka lagu daboolay 6A waxaa loogu talagalay cadaadis aad u sarreeya laakiin heerkul dhexdhexaad ah. Inta badan geedaha kirismaska ​​waxaa kujira marinnada albaabka iyo walxaha gaarka loo leeyahay ee adduunka loo yaqaan 'chokes'. Ceebaha ayaa loo isticmaalaa in lagu jaangooyo socodka ceelka.
Marka lagu daro ceelasha lafteeda, xarumo badan oo isku dhafan ayaa ku badan aagga saliida ama gaaska. Qalabka wax lagu socodsiiyo ee lagu sii daaweynayo saliida ama gaaska wuxuu u baahan yahay dhowr qalab. Walxahaani badanaa waa birta kaarboon ee lagu qiimeeyo fasallada hoose.
Mararka qaarkood, dheecaan aad u daxala - hydrogen sulfide - ayaa ku jira qulqulka batroolka ceeriin. Maadadan, oo sidoo kale loo yaqaan gaaska dhanaan, waxay noqon karaan dilaa. Si looga adkaado caqabadaha gaaska dhanaan, maaddooyinka qaaska ah ama farsamooyinka wax-soo-saarka walxaha sida ku xusan qeexitaanka NACE International MR0175 waa in la raaco.
Nidaamyada dhuumaha ee maraakiibta shidaalka badda iyo xarumaha wax soo saarka waxaa ku jira faleebo fara badan oo loo dhisay qeexitaanno badan oo kala duwan si loola tacaalo caqabadaha kala duwan ee xakamaynta socodka. Xarumahan sidoo kale waxay ka kooban yihiin nidaamyo xakameyn kala duwan iyo qalabka gargaarka cadaadiska.
Xarumaha wax soo saarka saliida, wadnaha halbowlaha waa nidaamka dhuumaha saliida ama gaaska dhabta ah. In kasta oo had iyo jeer aysan ku jirin madasha lafteeda, nidaamyo badan oo wax soo saar ayaa adeegsada geedaha kirismaska ​​iyo nidaamyada dhuumaha ka shaqeeya qoto dheer ee cagaha 10,000 ama ka badan. Qalabkan wax soo saar waxaa loo dhisay heerar badan oo machadyada American Petroleum Institute (API) oo tixraac loogu sameeyay dhowr dhaqameed lagu taliyay API (RPs).
Meelaha ugu waaweyn ee saliida laga soo saaro, habab dheeri ah ayaa lagu dabaqaa dheecaanka ceyriinka ah ee ka yimaada ceelka. Kuwaas waxaa ka mid ah kala soocidda biyaha hydrocarbons-ka iyo kala-soocidda gaaska iyo dareeraha gaaska dabiiciga ah ee qulqulka dareeraha. Nidaamyadan dhuumaha geedka-kirismaska ​​kadib waxaa guud ahaan loo dhisay American Society of Mechanical Engineers B31.3 nambarrada dhuumaha oo ay ku xiran yihiin filtarka loogu talagalay iyadoo la raacayo qeexitaannada qalabka API sida API 594, API 600, API 602, API 608 iyo API 609.
Qaar ka mid ah nidaamyadan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku jiraan iridda API 6D, kubbadda iyo walxaha jeegga. Maaddaama wax dhuubo kasta oo ka mid ah dusha sare ama markab daloolin ay ku dhex jiraan xarunta, shuruudaha adag ee loo adeegsanayo fiilooyinka API 6D ee dhuumaha ma khuseeyaan. In kasta oo noocyo kala duwan oo waalli ah loo adeegsado nidaamyadan tuubbada, nooca waalka ee la doorto waa waalka kubbadda.
In kasta oo dhuumaha badankood ay ka qarsoon yihiin aragtida, joogitaankooda badanaa waa iska cadahay. Calaamadaha yaryar ee tilmaamaya "dhuumaha batroolka" waa hal tilmaame muuqda oo ah joogitaanka dhuumaha gaadiidka dhulka hoostiisa ah. Dhuumahaas waxaa lagu qalabeeyaa qalabyo badan oo muhiim ah oo dhererkooda ah. Fiilooyinka wax lagu xidho ee gurmadka degdegga ah waxaa laga helaa xilliyada u dhexeeya heerarka, xeerarka iyo sharciyada. Qalabkani wuxuu u adeegaa adeegga muhiimka ah ee go'doominta qayb ka mid ah dhuumaha haddii ay daadato ama markii dayactir loo baahdo.
Sidoo kale ku kala firirsan dariiqa dhuumaha waa xarumo ay xariiqa ka soo baxdo dhulka oo marinka marinka laga heli karo. Saldhigyadani waa guriga loogu talagalay qalabka lagu soo saaro "doofaarka", oo ka kooban aalado la galiyay dhuumaha si loo baaro ama loo nadiifiyo qadka. Saldhigyadan doofaarradu soo bandhigaan badanaa waxay ka kooban yihiin dhowr waalka, midkood albaabka ama noocyada kubbadda. Dhammaan furayaasha nidaamka dhuumaha waa inay noqdaan deked buuxda (furitaan buuxa) si loogu oggolaado marinka doofaarrada.
Dhuumaha sidoo kale waxay u baahan yihiin tamar si loola dagaallamo khilaafaadka dhuumaha oo loo ilaaliyo cadaadiska iyo qulqulka khadka. Kombaresarada ama saldhigyada bamgareynta oo u eg noocyo yaryar oo warshad geedi socod ah iyada oo aan lahayn munaaradaha dhaadheer ee dillaaca la isticmaalo. Saldhigyadani waxay hoy u yihiin daraasiin albaab ah, kubbado iyo walxaha qasabadda dhuumaha.
Dhuumaha laftiisa ayaa loo qaabeeyey si waafaqsan heerar kala duwan iyo nambarro, halka walxaha qasabadaha ay raacayaan API 6D Pipeline Valves.
Waxa kale oo jira dhuumaha yaryar ee quudiya guryaha iyo dhismooyinka ganacsiga. Khadadkaani waxay bixiyaan biyo iyo gaas waxaana ilaaliya waaladaha wax lagu xiro.
Degmooyinka waaweyn, gaar ahaan qaybta woqooyi ee Mareykanka, waxay u fidiyaan uumi kuleylka macaamiisha ganacsiga. Khadadkan uumiga bixiya waxaa lagu qalabeeyaa valves kala duwan oo lagu xakameeyo laguna habeeyo bixinta uumiga. In kasta oo dheecaanku yahay uum, cadaadiska iyo heerkulku way ka hooseeyaan kuwa laga helo jiilka uumiga ee warshadda tamarta. Noocyo kala duwan oo noocyada waalka ah ayaa loo adeegsadaa adeeggan, in kasta oo walxaha furfuran ee la ixtiraami karo ay weli yihiin xulasho caan ah.
TIXRAACA IYO PETROCHEMICAL
Fiilooyinka wax lagu nadiifiyo waxay ka xisaabtamaan isticmaalka waalka warshadaha oo ka badan qaybaha kale ee waalka. Soo sifeynta ayaa hooy u ah dheecaannada wax dillaaca iyo mararka qaarkood, heerkul sarreeya.
Waxyaabahani waxay qeexayaan sida loo dhiso qalabyada iyada oo la raacayo qeexitaanka naqshadeynta qalabka valve ee API 600 (gate valves), API 608 (ball valves) iyo API 594 (check valves). Sababtoo ah adeegga qallafsan ee ay la kulmaan qaar badan oo ka mid ah qalabkan, gunnada daxalka ee dheeraadka ah ayaa badanaa loo baahan yahay. Gunnadan waxaa lagu muujiyaa dhumuc weyn oo gidaar ah oo lagu caddeeyay dukumiintiyada naqshadeynta API.
Ku dhowaad nooc kasta oo waalka weyn waxaa laga heli karaa tiro badan oo ka mid ah sifeyn weyn oo caadi ah. Waalka albaabka oo meel walba yaal ayaa wali ah boqorka buurta leh dadka ugu badan, laakiin rubuc-wareegyada ayaa qaadaya tiro sii kordheysa oo ka mid ah suuqooda. Waxyaabaha rubuc-soo-baxa ah ee samaynta soo-galayaasha guuleysta ee warshaddan (oo sidoo kale mar ay hareeyeen alaabooyin toosan) ayaa waxaa ka mid ah waxqabadka sare ee seddex-geesoodka balastarka balanbaaliska iyo biraha lagu dhejiyo birta.
Iridda caadiga ah, adduunka iyo jeegagga walxaha qarxa ayaa weli laga helayaa si wadajir ah, iyo qalbi ahaanta qaabkooda iyo dhaqaalahooda waxsoosaarka, ma baabi'i doono waqti dhow.
Qiimeynta cadaadiska ee filtarka sifeynta waxay ka socotaa qaybta laga bilaabo Fasalka 150 ilaa Fasalka 1500, iyadoo Fasalka 300 uu yahay midka ugu caansan.
Dhuxulada kaarboon caadiga ah, sida darajada WCB (cast) iyo A-105 (been abuur) ayaa ah waxyaabaha ugu caansan ee la cayimay loona isticmaalay filtarka ee loogu talagalay adeegga sifeynta. Qaar badan oo ka mid ah codsiyada habka turxaan bixinta ayaa riixaya xadka heerkulka sare ee kaararka kaarboon caadiga ah, iyo aaladaha heerkulka sare ayaa lagu qeexay barnaamijyadan. Kuwa ugu caansan ayaa ah biraha chrome / moly sida 1-1 / 4% Cr, 2-1 / 4% Cr, 5% Cr iyo 9% Cr. Birta ahama iyo aluminium-nikil sare ayaa sidoo kale loo isticmaalaa qaar ka mid ah geeddi-socodka sifeynta khaaska ah ee adag.
Warshadaha kiimikada ayaa si weyn u adeegsada filtarka noocyadiisa iyo qalabkiisa. Laga soo bilaabo dhirta yaryar ilaa dhismooyinka waaweyn ee kiimikada ee laga helo Xeebta Gacanka, filtarku waa qayb weyn oo ka mid ah nidaamyada tubbada nidaamka kiimikada.
Inta badan codsiyada ku jira geeddi-socodka kiimikada ayaa ka hooseeya cadaadiska marka loo eego habab badan oo wax lagu safeeyo iyo koronto dhalinta. Fasallada cadaadiska ugu caansan ee loo yaqaan 'valves plant' iyo tuubooyinka kiimikada waa Fasallada 150 iyo 300. Dhirta kiimikada sidoo kale waxay ahaayeen darawalkii ugu weynaa ee la wareegga saamiga suuqa ee filtarka kubbadda ay ka soo halgameen aaladda toosan 40 sano ee la soo dhaafay. Qalabka waalka ee adkaysiga leh, oo leh xiriddiisa eber-baxsiga, ayaa ku habboon codsiyada dhirta kiimikada badan. Cabbirka is haysta ee waalka kubbadda waa muuqaal caan ah sidoo kale.
Weli waxaa jira qaar ka mid ah dhirta kiimikada iyo geeddi-socodka dhirta halkaasoo doorbidiye toosan la doorbido. Xaaladahan oo kale, API-ka 603 ee naqshadeysan ee caanka ah, oo leh darbiyo qafiif ah iyo culeys fudud, ayaa badiyaa doorta albaabka ama waalka adduunka. Xakamaynta kiimikooyinka qaarkood ayaa sidoo kale si wax ku ool ah loogu dhammaystiraa diaphragm ama faleebo qanjidhada.
Sababta oo ah dabeecadda halaagga ee kiimikooyin badan iyo hababka sameynta kiimikada, xulashada maaddadu waa muhiim. Qalabka defacto waa heerka 316 / 316L ee birta austenitic ahama. Maaddadani waxay si fiican u shaqeysaa si ay ula dagaallanto daxalka ka imanaya koox ka mid ah dareerayaasha mararka qaarkood xun.
Qaar ka mid ah codsiyada adag ee waxyeellada leh, difaac dheeraad ah ayaa loo baahan yahay. Darajooyinka kale ee waxqabadka sare ee birta austenitic ahama, sida 317, 347 iyo 321 ayaa badanaa lagu doortaa xaaladahaas. Waxyaabaha kale ee loo isticmaalo waqti ka waqti si loo xakameeyo dareeraha kiimikada waxaa ka mid ah Monel, Alloy 20, Inconel iyo 17-4 PH.
LNG IYO GAAS KALA GARASHADA
Labada gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah (LNG) iyo hababka looga baahan yahay kala saarista gaaska waxay ku tiirsan yihiin dhuumaha balaaran. Codsiyadaani waxay u baahan yihiin fureyaal ku shaqeyn kara heerkulka aadka u hooseeya ee cryogenic. Warshadaha LNG, oo si xawli ah ugu koraya dalka Mareykanka, ayaa si isdaba joog ah u raadinaya kor u qaadista iyo hagaajinta geeddi socodka cabitaanka gaaska. Ujeeddadan, dhuumaha iyo wiishka ayaa aad u weynaaday oo shuruudaha cadaadiska ayaa kor loo qaaday.
Xaaladdani waxay u baahan tahay soosaarayaasha waalka si ay u horumariyaan naqshado si ay ula kulmaan xuduudaha adag. Kubadaha wareega iyo wareega balanbaalisku waxay caan ku yihiin adeegga LNG, oo leh 316ss [birta birta ah] waxyaabaha ugu caansan. ANSI Class 600 waa saqafka caadiga ee cadaadiska inta badan codsiyada LNG. In kasta oo alaabada rubuc-wareega ay yihiin noocyada kala-soocidda ugu caansan, irridda, adduunka iyo jeegagga hubinta ayaa laga heli karaa dhirta sidoo kale.
Adeegga kala-soocidda gaaska wuxuu ku lug leeyahay qaybinta gaaska shaqsiyadiisa aasaasiga ah. Tusaale ahaan, hababka kala soocista hawada waxay keenaan nitrogen, oxygen, helium iyo gaasas kale oo raad raac ah. Dabeecadda heer-kulkeedu aadka u hooseeyo ee geeddi-socodka waxay ka dhigan tahay in loo baahan yahay qalab badan oo loo yaqaan 'cryogenic valves'.
LNG iyo dhirta kala-saarista gaaska labaduba waxay leeyihiin qalab heerkulkoodu hooseeyo oo ay tahay inay ku sii shaqeeyaan inta lagu jiro xaaladahaan murugada leh. Tan macnaheedu waa in nidaamka xirxirida waalka waa in sare looga qaadaa dareeraha heerkulka hoose iyadoo loo marayo isticmaalka gaaska ama tiirka isku soo ururaya. Tiirkan gaasku wuxuu ka celinayaa dheecaanka inuu sameeyo baraf ku wareegsan meesha wax lagu baakadeeyo, taas oo ka hortageysa jirida waalka inay rogto ama ay kacdo.
Dhismayaasha ganacsiga way nagu hareeraysan yihiin laakiin aan fiiro gaar ah u yeelanno sida ay u dhisan yihiin mooyee, wax yar ayaan ka ogaan karnaa halbawlayaasha xididdada dareeraha ah ee ku dhex qarsoon gidaarkooda, dhalooyinka, birta.
Qiyaasta guud ee dhisme kasta waa biyo. Dhammaan qaab-dhismeedyadani waxay ka kooban yihiin nidaamyo tuubooyin kala duwan oo xambaarsan isku-dhafyo badan oo ka kooban hawo-haroojiin / oksijiin ah oo ah dheecaano la cabi karo, biyaha qashinka, biyaha kulul, biyaha cawlan iyo ilaalinta dabka.
Marka laga eego dhinaca badbaadada dhismaha, nidaamyada dabka ayaa ah kuwa ugu muhiimsan. Difaaca dabka ee dhismayaasha guud ahaan waa la quudiyaa waxaana laga buuxiyaa biyo nadiif ah. Si nidaamyada biyaha dabka ay u noqdaan kuwa wax ku ool ah, waa inay noqdaan kuwo la isku halleyn karo, leh cadaadis ku filan oo si ku habboon ugu habboon dhammaan dhismaha. Nidaamyadan waxaa loogu talagalay inay si otomaatig ah tamar ugu yeeshaan xaaladda dabka.
Dhismayaasha dhaadheer waxay u baahan yihiin isla adeegsiga cadaadiska biyaha ee dabaqyada sare sida dabaqyada hoose sidaa darteed bambooyin-cadaadis sare leh iyo dhuumaha waa in loo isticmaalaa si kor loogu qaado biyaha. Nidaamka dhuumaha badanaa waa Class 300 ama 600, waxay kuxirantahay dhererka dhismaha. Dhammaan noocyada filtarka ayaa loo adeegsadaa barnaamijyadan; si kastaba ha noqotee, naqshadaha waalka waa in ay ansixiyaan shaybaarada hoosta laga soo qoro ama warshad isku jirta oo loogu talagalay dabka adeegga ugu weyn.
Fasallo isku mid ah iyo noocyada filtarka ee loo isticmaalo aaladda adeegga dabka ayaa loo isticmaalaa qaybinta biyaha la cabbo, in kasta oo hannaanka oggolaanshuhu uusan ahayn mid adag.
Nidaamyada qaboojiyaha ganacsiga ee laga helo dhismayaasha waaweyn ee ganacsiga sida dhismayaasha xafiisyada, hudheelada iyo isbitaallada badiyaa waa la kexeeyaa. Waxay leeyihiin unug qaboojiye weyn ama kuleeliyaha si loo qaboojiyo ama loo kululeeyo dareeraha loo isticmaalo wareejinta qabow ama heerkulka sare. Nidaamyadani badanaa waa inay qabtaan qaboojiyeyaasha sida R-134a, hydro-fluorocarbon, ama haddii ay jiraan nidaamyada kuleylka waaweyn, uumi. Sababtoo ah cabbirka is haysta ee baalbalada iyo filtarka kubbadda, noocyadani waxay caan ku noqdeen nidaamyada chiller ee HVAC.
Dhinaca uumiga, qaar ka mid ah filtarka wareega-wareega ayaa sameeyay istcimaalo isticmaalka, hase yeeshee injineero badan oo tuubooyin ah ayaa wali ku tiirsan iridda toosan iyo filtarka adduunka, gaar ahaan haddii dhuumaha ay u baahan yihiin dhammaad-alxanka. Codsiyadaan uumiga ah ee dhexdhexaadka ah, birtu waxay qaadatay meeshii birta lagu tuuray alxanka awgiis.
Nidaamyada kululaynta qaarkood waxay u isticmaalaan biyaha kulul halkii uumiga u noqon lahaayeen dheecaan wareejin ah. Nidaamyadan waxaa si wanaagsan loogu adeegaa birta ama birta birta lagu xidho. Kubad-fadhiisiyaha adkeysiga-celiska ah ee wareega rubuc-wareega ah iyo balastarrada balanbaalisku aad ayey caan u yihiin, in kasta oo naqshadaha toosan qaarkood wali la isticmaalo.
In kasta oo caddeynta codsiyada waalka ee ku xusan qodobkan aan la daawan karin inta lagu jiro safarka Starbucks ama guriga ayeeyo, qaar ka mid ah walxaha muhiimka ah ayaa had iyo jeer ka agdhow. Xitaa waxaa ku jira fallaagado mashiinka gaariga loogu tala galay in lagu aado meelahaas sida kuwa carburetor-ka ee kontaroola qulqulka shidaalka ee mashiinka iyo kuwa kujira matoorka ee kontaroola qulqulka baatroolka ee bistooladaha iyo markale. Haddayna filtarkaasi ku dhowaan karin nolol maalmeedkeena, tixgeli xaqiiqda in qalbiyadeennu si joogto ah u garaacaan iyada oo loo marayo afar aalado muhiim u ah xakamaynta socodka.
Tani waa tusaale kale oo xaqiiqda ah in: filtarku runti meel walba yaalliin. VM
Qeybta II ee maqaalkani wuxuu daboolayaa warshado dheeri ah oo lagu isticmaalo qalab. Booqo www.valvemagazine.com si aad uga aqriso saxarka & warqadda, codsiyada badda, biyo-xireennada iyo tamarta korantada, qorraxda, birta iyo birta, aerospace, juquraafi, iyo farsamada abuurista iyo qashin-qubka.
GREG JOHNSON waa madaxweynaha United Valve (www.unitedvalve.com) Houston. Isagu waa tifaftire wax ku biiriya joornaalka VALVE, gudoomiyihii hore ee Golaha Dayactirka Qalabka iyo xubin ka tirsan guddiga VRC. Wuxuu sidoo kale u shaqeeyaa guddiga waxbarashada iyo tababarka ee VMA, waa gudoomiye ku xigeenka guddiga isgaarsiinta ee VMA waana madaxweynihii hore ee Bulshadda Soosaarayaasha Heerarka.